धादिङमा पहि रोले हेर्दा हेर्दै सबै परिवार सखा प पार्यो, यस्तो कसैलाई नपरोस! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/धादिङमा पहि रोले हेर्दा हेर्दै सबै परिवार सखा प पार्यो, यस्तो कसैलाई नपरोस!
धादिङमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको मृ त्यु भएको छ।त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ आगिञ्चोकमा पहिरोमा परेर २५ वर्षीय मिलन खाँण, उनकी २२ वर्षीया श्रीमती सम्झना खाँण र दुई वर्षीया छोरी अन्जिता खाँणको मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परेर उनीहरूको मृ त्यु भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता, डीएसपी रुपक खड्काका अनुसार मृ तक तीनै जनाको श व निकालिसकिएको छ। उनीहरूको श व पोस्टमार्टमका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पठाइएको छ। हिजो धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया निरुता परियारको पहिरोमा परि मृ त्यु भएको थियो। पहिरोले धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा क्ष ति पुर्‍याएको छ। चितवन जोड्ने मौवाखोलाको पुल भत्किएको छ पृथ्वी राजमार्गको ठाउँठाउँमा पहि रो जाँदा आवातजावत अव रुद्ध भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :अविरल वर्षाका कारण संघीय राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका ठप्प भएको छ। धादिङ र चितवन जिल्ला जोड्ने मौवाखोला पुलको धादिङ तर्फको पिल्लर पानीले खोल्दा सडकको पीच क टान भएपछि सोमबार दिउँसोदेखि राजधानीसँग पृथ्वी राजमार्गको सम्पर्क टु टेको छ।
पुलको धादिङ तर्फको भुभाग खहरे खोलाले बगाएपछि सडक र पुल बीचबाट खोला बगेकाले सवारी आवागमन ठ प्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धादिङका सूचना अधिकारी डीएसपी रुपक खड्काले बताए। मौवाखोलामा आएको बाढीले करिब १५ मिटर पुलसँगै जोडिएको सडकसमेत बगाएको छ। सडक ठप्प हुँदा तनहुँ र चितवनबीच समेत आवतजावत रोकिएको छ। मौवाखोलाले तीन वटा घरसमेत बगाएको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ६ स्थित चारकिलोमा पनि पहि रो खसेको छ। सोमबार बिहान पाँच बजे प हिरो खसेपछि दुईतर्फी सडक बन्द छ। ‘माथिबाट लगातार प हिरो खसिरहेकाले हटाउनै सकिएन’, नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले भने, ‘पानी कम भयो भने मंगलबार मात्रै काम थाल्छौं।’
त्यस्तै, कुरिनटार, चोर खोला लगायतका स्थानमा पनि पहिरो खसेको छ। चारकिलो नारायण मुग्लिन सडकको सबैभन्दा बढी प हिरोको जो खिम भएको स्थान हो। असार दुई गते पनि उक्त स्थानमा प हिरो खस्दा दुई दिनसम्म यातायात प्रभावित भएको थियो। प हिरो नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको रक नेटिङ पनि रोकिएको छ। कमजोर भूबनोटका कारण पहिरो खसिरहँदा मजदुरले काम गर्न सकेका छैनन्। पहिरोका कारण सीमलताल, जुगेडी, रामनगरमा सवारी रोकिएको छ। जो खिममा रहेका सवारीलाई सु रक्षित स्थानमा फर्काइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख दयाकृष्ण भट्टले बताए। नारायणगढ मुग्लिन सडकमा पहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्र ३२ वटा छन।